Ny fiakaran'ny teknolojia fakan-tsarimihetsika amin'ny vatana - Vahaolana OMG
Ny fivoaran'ny Technology Camera-Worn
Iray amin'ireo zavatra lehibe fantatra amin'ny teknolojia ny fitomboany sy ny fivoarany. Nanomboka toy ny sombinà teknolojia tsotra fotsiny izany, fa rehefa mandeha ny fotoana dia mitombo ny endri-javatra bebe kokoa ary lasa mora kokoa sy mora vava kokoa. Indray mandeha dia feno famononana efitrano sy be dia be ny informatika. Ankehitriny ny solosaina dia mety ho kely loatra ahafahany miditra ao amin'ny tànana, mitovy amin'ny fakan-tsary. Mihatsara ny fakantsary amin'ny antsipirian'ny antsipirihany ary hatsaraina matetika, izany no nahatonga ny mpikaroka sy ny mpamorona hanao karazan-tsary maro kokoa manohitra ny lozika taloha. Mitombo ny tinady hiatrehana ny filaminan'ny vahoaka
Matetika misy ireo fivoriana maraina maraina izay miresaka amin'ny tompon'andraikitra hafa ny tompon'andraikitra, matetika dia ny fanazaran-tena azo antoka ary ny firaketana an-tsoratra ireo fihaonan'ny mpanao heloka bevava mba hanampiana amin'ny fanadihadiana sy ny fitarainana. Fa misy koa ny fotoana izay angatahana ireo firaketana an-tsoratra ireo mandritra ny fotoam-pikarohana ary ny zava-misy rehetra dia izao: "Andriamatoa ny zava-nitranga dia nitranga haingana ka tsy nisy fotoana tokony hametrahana ny fakantsary" izany no nahatonga ny fahatongavan'ireo polisy betsaka , ny tsy fahaizana mamoaka porofo horonantsary dia lasa sarotra be hatrany ny zavatra. Ny tranga an-tanana ho an'ny olom-pirenena matetika dia masiaka be ary ny hany fomba iatrehana dia ny porofo fa tsy tanteraka izany araka ny nolazaina azy.
Ny fotoana tsy ahitanao ny firaketana an-tsoratra ny zava-mitranga dia nanjary tsy fahita firy tamin'ny herin'ny polisy mandroso, izay maharesy ny fampiasana fakan-tsary mitazona vatana. Tena tsy azo omena tsiny ilay manamboninahitra, sarotra ny amin'ny toe-javatra mampihoron-koditra ary ny zavatra voalohany ao an-tsainao dia ny fandraisam-peo mba hahafahanao manondro porofo any aoriana. Raha tsy afaka manome porofo horonantsary izay ao anatin'ny politikany ny herin'ny polisy dia very ny fitokisan'ny vahoaka ka ho sarotra be amin'ny fikarakarana ity raharaha ity. Indraindray, mety mila fifehezana mihitsy aza izy rehefa manao asa fakan-tahaka ny manamboninahitra iray na manakana ny tranga mampidi-doza mety hitranga. Ireo tranga ireo dia tsy azo hamarinina, mpiandraikitra izay nanao tsara ny asany nefa tsy afaka manome porofo horonantsary dia hosazina. Tsy misy olona faly amin'ny fanasaziana azy ireo indrindra fa nanao soa. Na ny lehiben'ny mpitandro filaminana aza dia mety hijaly amin'ny lafiny politika rehefa misy ny toe-javatra toy izany eo ambany fiadidiany, mety hiteraka savorovoro na fanontaniana.
Efa ao anatin'ny vanim-potoana vaovao isika, ny taranaka voalohany amin'ny fakantsary fiakanjo vatana dia tsy azo ampitahaina amin'ireo fakan-tsary farany. Izahay dia nanana an'ity arbaika ity dia mila manindry bokotra an-tànana hanomboka ny fandraisam-peo, araka ny nohazavaina teo aloha dia niteraka olana be. Nisy ihany koa ny faharesen-dahatra izay tafiditra amin'ny hoe tokony hampiasa tobin'antsara mba hampihenana ny firaketana fakan-tsary amin'ny fakantsary. Izany dia mety ho tena mitaky fatratra sy tsy mahazo aina. Hatramin'ny taloha, ny teknolojia fampiharana ny lalàna dia hita fa mivoatra amin'ny fomba lehibe, nanjary fahita ankehitriny ny faharanitan-tsaina. Amin'izao vanim-potoana vaovao izao, ny teknolojia marani-tsaina dia resaka momba ny tanàna, ny automation dia voantso isaky ny tekinika. Mba hamerenana ny fakan-tsary mitazona vatana, manao ny teknolojia automatiam-tsaina ity. Nahatonga fomba ara-pandraketana mifototra amin'ny politika ho marina kokoa sy tsy azo itokisana.
Ny fenitry ny vanim-potoana vaovao ho an'ny firaketana fandrakofana automatikika tarihin'ny politika
Nifindra tamin'ny alàlan'ny fakan-tsary miovaova namboarina ho an'ny vanim-potoana vaovao izay namboarina an-tsoratra ny azy ny hery ara-pôlitika, izay voatosika handrakitra an-tsoratra ny azy ireo. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo fitaovana mandeha ho azy ireo amin'ny mpiandraikitra dia miasa, afaka mamita ny andraikiny amin'ny fomba mahomby kokoa izy ireo. Ny fakan-tsary mihetsika amin'ny alàlan'ny rindrambaiko dia efa namboarina tsara hanombohana sy hampitsahatra ny rehetra mifanaraka amin'ny politikam-pandraketana manokana ataon'ny masoivoho. Amin'ny alàlan'ny rivotra (OTA) vaovao izay azo alefa sy alaina amin'ny fakantsary eny an-tsaha. Ny fanoratana mifototra amin'ny politika dia nanjary tsy mifanaraka amin'ny lalànan'ny maso miakatra mandroso. Raha atao amin'ny teny hafa, azo ovaina mora foana ny fanovana izay atao amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny fakantsarinao fotsiny.
Ny fametrahana sensor sensor fiara dia nahafahana nanapa-kevitra tamin'ny fanamafisana, izay manampy ny fanamafisam-peo automatique rehefa vita ny fiara manokana. Mety hanomboka, ohatra, ny fandraisam-peo rehefa mihodina ny jiro vonjy maika an'ny fiara patrol ary hisokatra ny varavarana. Ity dia teknolojia automatique tsotra izay tena mahomby. Ny mpisera fiara hafa dia mitarika ny fakantsary fakana sary:
Lasan-basy sy antsy basy
Izany dia sensor izay nahatonga ny firaketana an-tsoratra. Misy ihany koa ny teknolojia izay mandrindra mandritra ny fanenjehana tongotra, miaraka amin'ny fandrosoana amin'ny haitao haingana dia haingana. Ny fakan-tsary vaovao dia afaka mamaritra raha toa ka mihazakazaka ny mandeha na mandeha an-tongotra, dia mety handrisika ireo fakantsary fakantsary ity. Fampandrenesana mety mitarika ny tenanao rehefa latsaka ambany ny manamboninahitra iray; ity dia miasa amin'ny fomba marani-tsaina, raha sendra sahirana ny manamboninahitra iray ary mila mitaky ny famerenany izy. Manomboka ny fandraisam-peo mandeha ho azy ny rafitra ary miantso roa mandritra ny roa minitra ny horonan-tsary sy ny feo, izany no zatra hanairana sy hiantso ny sain'ireo tompon'andraikitra akaiky. Ny rafitra dia manao mihoatra noho ny fanairana fotsiny ireo manampahefana teo akaiky teo satria efa manana GPS ao anatiny izy ireo. Ny toerana misy ny manamboninahitra eo ambany ihany koa alefa miaraka amina fanairana ny alahelo. Izany dia mamela valiny haingana sy haingana kokoa amin'ny toe-javatra toy izany.
Automation ny mpanova lalao
Iray amin'ireo teknolojia efa mandroso indrindra izay manodidina ny antsoin'ny Computer-Aided Dispatch (CAD). Manomboka mandeha ho azy io rehefa mandeha ny antso ho an'ny serivisy iray. Avy eo ny sehatry ny hetsika dia mamadika ny fakan-tsary raha vao tonga any amin'ilay toerana voatondro ilay tompon'andraikitra, ity toerana ity dia mety hampiditra faritra miaraka amin'ny mpamaky iray. Ity faritra ity dia mety ho natomboky ny CAD na afaka amboarina manual.
Ho fehiny, rehefa mitohy ny fanoratana mifototra amin'ny fitsipika, ny masoivoho fampiharana ny lalàna dia mahazo tombony amin'ny fanarahana ny politika satria nesorina ny fahadisoan'ny olona sy ny tsy fitoviana be. Ny fandraisam-peo mandeha ho azy dia manome horonantsary takiana indrindra indrindra amin'ny fotoana lehibe. Ity teknolojia mialoha ity dia mampitombo ny fahatokisan-bahoaka, ny fangaraharana ary ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarahamonina raha toa ka ny serivisy no omena.
Ny fivoaran'ny Technology Camera-Worn no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin